Imigomo Yokusebenzisa - BikeHike
Le migomo nemibandela elandelayo ibusa konke ukusetshenziswa kwewebhusayithi ye-bikehike.org nakho konke okuqukethwe, izinsizakalo kanye nemikhiqizo etholakalayo noma ngewebhusayithi (kuhlanganiswe ndawonye, ​​Iwebhusayithi). Iwebhusayithi iphethwe futhi iqhutshwa yibhayisikili (“ibhayisikili”). Iwebhusayithi inikezwa ngokuya ngokwamukelwa kwakho ngaphandle kokuguqulwa kwayo yonke imigomo nemibandela equkethwe lapha kanye nayo yonke eminye imithetho yokusebenza, izinqubomgomo (kuhlanganise, ngaphandle komkhawulo, Inqubomgomo Yobumfihlo yebhayisikili) kanye nezinqubo ezingase zishicilelwe ngezikhathi ezithile kule Site. ukugibela ibhayisikili (ngokuhlangene, “Isivumelwano”).
Sicela ufunde lesi Sivumelwano ngokucophelela ngaphambi kokufinyelela noma ukusebenzisa Iwebhusayithi. Ngokufinyelela noma ukusebenzisa noma iyiphi ingxenye yesizindalwazi, uyavuma ukuboshelwa yimigomo nemibandela yalesi sivumelwano. Uma ungavumelani nayo yonke imigomo nemibandela yalesi sivumelwano, ngeke ukwazi ukufinyelela Iwebhusayithi noma usebenzise noma yiziphi izinsiza. Uma le migomo nemibandela ithathwa njengomnikelo wokuhamba ngebhayisikili, ukwamukelwa kukhawulelwe kule migomo. Iwebhusayithi itholakala kuphela kubantu okungenani abaneminyaka eyi-13 ubudala.
I-akhawunti yakho ye-bikehike.org kanye nesayithi. Uma udala ibhulogi/isizindalwazi kuWebhusayithi, unesibopho sokugcina ukuvikeleka kwe-akhawunti yakho kanye nebhulogi, futhi unesibopho esigcwele sazo zonke izinto ezenzeka ngaphansi kwe-akhawunti kanye nanoma yiziphi ezinye izenzo ezithathwe mayelana nebhulogi. Akumelwe uchaze noma unikeze amagama angukhiye kubhulogi yakho ngendlela edukisayo noma engekho emthethweni, okuhlanganisa nendlela okuhloswe ngayo ukuhwebelana ngegama noma isithunzi sabanye, futhi ukugibela ibhayisikili kungase kushintshe noma kususe noma iyiphi incazelo noma igama elingukhiye elilibheka njengelingafaneleki noma elingekho emthethweni, noma uma kungenjalo kungabangela isikweletu sokuhamba ngebhayisikili. Kufanele ngokushesha wazise ukuhamba ngebhayisikili nganoma yikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwebhulogi yakho, i-akhawunti yakho nanoma yikuphi okunye ukwephulwa kwezokuphepha. ukuhamba ngebhayisikili ngeke kube nesibopho sanoma yiziphi izenzo noma ukweqiwa Nguwe, okuhlanganisa noma yimuphi umonakalo wanoma yiluphi uhlobo owenziwe ngenxa yalezo zenzo noma ukweqiwa.
Isibopho Sabanikeli. Uma usebenzisa ibhulogi, ubeke amazwana kubhulogi, uthumele izinto kuWebhusayithi, uthumele izixhumanisi kuWebhusayithi, noma wenze (noma uvumele noma yimuphi omunye umuntu ukuba enze) ukwaziswa okutholakala ngeWebhusayithi (noma iziphi izinto ezinjalo, “Okuqukethwe” ), Ubophezelekile ngokuphelele ngokuqukethwe, nanoma yikuphi ukulimala okuvela kulokho okuqukethwe. Kunjalo noma ngabe Okuqukethwe okukhulunywa ngakho kuhlanganisa umbhalo, imifanekiso, ifayela lomsindo, noma isofthiwe yekhompuyutha. Ngokwenza okuqukethwe kutholakale, uyamela futhi uyagunyaza ukuthi: ukulanda, ukukopisha kanye nokusetshenziswa kokuqukethwe angeke kwephule amalungelo obunikazi, okuhlanganisa kodwa kungagcini nje ngelungelo lobunikazi, ilungelo lobunikazi, uphawu lokuhweba noma amalungelo emfihlo yohwebo, anoma yimuphi umuntu wesithathu;
Uma umqashi wakho enegunya lempahla yengqondo oyidalayo, nawe (i) uthole imvume evela kumqashi wakho ukuthumela noma ukwenza ukuthi okuqukethwe kutholakale, kufaka phakathi kodwa kungagcini kunoma isiphi isofthiwe, noma (ii) okuqinisekisiwe kumqashi wakho ukuyeka Wonke amalungelo noma okuqukethwe;
Uye wahambisana ngokugcwele nanoma yiziphi amalayisense ezivela eceleni okuhlobene nokuqukethwe, futhi wenze zonke izinto ezidingekayo ukuze udlule ngempumelelo kubasebenzisi bokugcina noma yimaphi amagama adingekayo;
Okuqukethwe akuqukethe noma ukufaka noma yikuphi amagciwane, izibungu, i-malware, amahhashi weThrojani noma okuqukethwe okulimazayo noma okulimazayo;
Okuqukethwe akulona ogaxekile, akukona umshini- noma okukhiqizwa ngokungahleliwe, futhi akuqukethe okuqukethwe okungekho emthethweni noma okungafuneki kokuhweba okuklanyelwe ukushayela ithrekhi kumasayithi wesithathu noma ukukhulisa izinga lokusekela injini yezinkampani zangaphandle, noma ukwenza izenzo ezingekho emthethweni (ezifana Njenge-phishing) noma ukudukisa abamukeli mayelana nomthombo wendaba (njenge-spoofing);
Okuqukethwe akulona ucansi, akuqukethe ukusongela noma kuvuselela udlame kubantu noma izinhlangano, futhi akuphuli ilungelo lobumfihlo noma lokukhangisa kwanoma yiluphi umuntu wesithathu;
Ibhulogi yakho ayitholi ukukhangiswa ngemilayezo ye-elektroniki engafuneki njengezixhumanisi zogaxekile kumaqembu wezindaba, izinhlu ze-imeyili, amanye amabhulogi namasayithi, kanye nezindlela zokuphromotha ezingafuneki ezifanayo;
ibhulogi yakho ayiqanjwanga ngendlela edukisa abafundi bakho ekucabangeni ukuthi ungomunye umuntu noma inkampani. Isibonelo, i-URL yebhulogi yakho noma igama akulona igama lomunye umuntu ngaphandle kwakho noma inkampani ngaphandle kweyakho; futhi
Uma, esimweni sokuqukethwe okubandakanya ikhodi yekhompuyutha, uhlukanise ngokunembile futhi/noma uchaze uhlobo, imvelo, ukusetshenziswa kanye nemiphumela yezinto zokusebenza, noma ngabe ucelwe ukwenza kanjalo ngokuhamba ngebhayisikili noma ngenye indlela.
Ngokuthumela Okuqukethwe ekugibeleni ibhayisikili ukuze kufakwe kuWebhusayithi yakho, unikeza ukugibela ibhayisikili ilayisense yomhlaba wonke, mahhala, nengelona elikhethekile lokukhiqiza kabusha, ukuguqula, ukujwayelanisa nokushicilela Okuqukethwe kuphela ngenjongo yokubonisa, ukusabalalisa kanye nokukhangisa ibhulogi yakho. . Uma ususa Okuqukethwe, ukuhamba ngebhayisikili kuzosebenzisa imizamo enengqondo yokukususa kuWebhusayithi, kodwa uyavuma ukuthi ukugcinwa kunqolobane noma izinkomba Zokuqukethwe kungase kungenziwa kungatholakali ngokushesha.
Ngaphandle kokunciphisa noma isiphi salezo zethulo noma iziqinisekiso, ukugibela ibhayisikili unelungelo (nakuba kungesona isibopho), ngokubona kwebhayisikili kuphela (i) ukwenqaba noma ukususa noma yikuphi okuqukethwe, ngokombono ophusile wokugibela ibhayisikili, okwephula noma iyiphi inqubomgomo yokugibela ibhayisikili noma okuyingozi nganoma iyiphi indlela. noma okungabazekayo, noma (ii) ukunqamula noma ukwenqabela ukufinyelela nokusebenzisa Iwebhusayithi kunoma yimuphi umuntu noma inhlangano nganoma yisiphi isizathu, ngokubona kokuhamba ngebhayisikili. ukuhamba ngebhayisikili ngeke kube nesibopho sokuhlinzeka ngembuyiselo yanoma imaphi amanani akhokhelwe ngaphambilini.
Inkokhelo Nokuvuselela. Imigomo Ejwayelekile.
Ngokukhetha umkhiqizo noma isevisi, uyavuma ukukhokha ukugibela ibhayisikili imali yesikhathi esisodwa kanye/noma yanyanga zonke noma yonyaka yokubhalisa ekhonjisiwe (imibandela yokukhokha eyengeziwe ingase ifakwe kokunye ukuxhumana). Izinkokhelo zokubhaliselwe zizokhokhiswa ngesisekelo sokukhokha kusengaphambili ngosuku obhalisela ngalo ukuthuthukisa futhi zizofaka ukusetshenziswa kwaleyo sevisi isikhathi sokubhaliselwe sanyanga zonke noma sonyaka njengoba kukhonjisiwe. Izinkokhelo azibuyiselwa.
Ngaphandle uma wazisa ukuhamba ngebhayisikili ngaphambi kokuphela kwesikhathi esisebenzayo sokubhalisa ukuthi ufuna ukukhansela okubhalisele, ukubhalisa kwakho kuzovuselelwa ngokuzenzakalelayo futhi uyasigunyaza ukuthi siqoqe imali yokubhalisela eyosebenza ngaleso sikhathi yonyaka noma yenyanga yalokho okubhalisele (kanye nanoma yiziphi izintela) sisebenzisa noma yiliphi ikhadi lesikweletu noma enye indlela yokukhokha esinerekhodi lakho ngawe. Ukuthuthukiswa kungakhanselwa noma nini ngokuthumela isicelo sakho ekugibeleni ibhayisikili ngokubhala.
Amasevisi. Izimali; Inkokhelo. Ngokubhalisela i-akhawunti Yezinsizakalo uvuma ukukhokha ukugibela ibhayisikili izindleko zokusetha ezisebenzayo kanye nezinkokhelo eziphindelelayo. Izinkokhelo ezisebenzayo zizofakwa kwi-invoyisi kusukela ngosuku amasevisi akho asungulwa ngalo nangaphambi kokusebenzisa lawo masevisi. Ukuhamba ngebhayisikili kunelungelo lokushintsha imigomo yokukhokha kanye nezimali ezikhokhwayo ezinsukwini ezingamashumi amathathu (30) ngaphambi kwesaziso esibhaliwe esiya kuwe. Izinsizakalo zingakhanselwa nguwe nganoma yisiphi isikhathi ngesaziso esibhaliwe sezinsuku ezingamashumi amathathu (30) sokuhamba ngebhayisikili.
Ukusekela. Uma isevisi yakho ihlanganisa ukufinyelela ekusekelweni kwe-imeyili okubalulekile. “Ukwesekwa kwe-imeyili” kusho ikhono lokwenza izicelo zosizo lobuchwepheshe nge-imeyili nganoma yisiphi isikhathi (ngemizamo enengqondo yokuhamba ngebhayisikili ukuze uphendule phakathi nosuku olulodwa lwebhizinisi) mayelana nokusetshenziswa Kwezinkonzo Ze-VIP. “Okubalulekile” kusho ukuthi ukwesekwa kuthatha kuqala kunokwesekwa kwabasebenzisi bezinsizakalo ezijwayelekile noma zamahhala ze-bikehike.org. Konke ukwesekwa kuzohlinzekwa ngokuhambisana nezinqubo ezijwayelekile zezinsizakalo zokugibela ibhayisikili, izinqubo nezinqubomgomo.
Isibopho Sezivakashi Zewebhusayithi. Ukuhamba ngebhayisikili akuzange kubuyekeze, futhi akukwazi ukubukeza, zonke izinto ezibonakalayo, okuhlanganisa isofthiwe yekhompiyutha, ezithunyelwe kuWebhusayithi, ngakho-ke ngeke zibe nesibopho salokho okuqukethwe, ukusetshenziswa noma imiphumela. Ngokusebenzisa Iwebhusayithi, ukugibela ibhayisikili akumeleli noma asikisele ukuthi kugunyaza okokusebenza okuthunyelwe lapho, noma ukuthi ikholelwa ukuthi lokho kwaziswa kunembile, kuwusizo noma akunangozi. Unesibopho sokuthatha izinyathelo zokuphepha njengoba kudingeka ukuze uzivikele wena namasistimu akho ekhompuyutha kumagciwane, izikelemu, amahhashi e-Trojan, nokunye okuqukethwe okuyingozi noma okulimazayo. Iwebhusayithi ingase iqukathe okuqukethwe okucasulayo, okungcolile, noma okunye okungabazekayo, kanye nokuqukethwe okuqukethe ukunemba kwezobuchwepheshe, amaphutha okuthayipha, namanye amaphutha. Iwebhusayithi ingase futhi ibe nezinto ezephula ubumfihlo noma amalungelo okukhangisa, noma ezephula impahla yengqondo namanye amalungelo obunikazi, abantu besithathu, noma ukulandwa, ukukopishwa noma ukusetshenziswa kwakho okungaphansi kwemibandela nemibandela eyengeziwe, eshiwo noma engashiwongo. ukugibela ibhayisekili alizibophezeli kunoma yimuphi umonakalo ovela ekusetshenzisweni kwezivakashi zeWebhusayithi, noma kunoma yikuphi ukudawunilodwa kwalezo zivakashi zokuqukethwe okuthunyelwe lapho.
Okuqukethwe Kuthunyelwe Kwamanye Amawebhusayithi. Asikabuyekezi, futhi asikwazi ukubukeza, zonke izinto ezisetshenziswayo, okuhlanganisa nesoftware yekhompiyutha, eyenziwe yatholakala ngamawebhusayithi kanye namakhasi ewebhu lapho i-bikehike.org ixhuma khona, kanye nesixhumanisi se-bikehike.org. Ukuhamba ngebhayisikili alinakho ukulawula kulawo mawebhusayithi namakhasi ewebhu okungewona amabhayisikili, futhi akunasibopho ngokuqukethwe kwawo noma ukusetshenziswa kwawo. Ngokuxhumanisa newebhusayithi okungeyona eyokuhamba ngebhayisikili noma ikhasi lewebhu, ukugibela ibhayisikili akumeli noma kusikisela ukuthi kugunyaza leyo webhusayithi noma ikhasi lewebhu. Unesibopho sokuthatha izinyathelo zokuphepha njengoba kudingeka ukuze uzivikele wena namasistimu akho ekhompuyutha kumagciwane, izikelemu, amahhashi e-Trojan, nokunye okuqukethwe okuyingozi noma okulimazayo. ukugibela ibhayisikili alikunaki ukubophezeleka nganoma yikuphi ukulimala okubangelwa ukusebenzisa kwakho amawebhusayithi okuhamba ngebhayisikili namakhasi ewebhu.
Ukwephulwa kwe-copyright kanye nenqubomgomo ye-DMCA. Njengoba ukugibela ibhayisikili kucela abanye ukuthi bahloniphe amalungelo ayo empahla yobuhlakani, ihlonipha amalungelo empahla yabanye. Uma ukholwa ukuthi lokho okubalulekile okutholakala noma okuxhunywe kuyo yi-bikehike.org kwephula ilungelo lakho lobunikazi, uyakhuthazwa ukuba wazise ukuhamba ngebhayisikili ngokuhambisana neNqubomgomo ye-Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) yebhayisikili. ukuhamba ngebhayisikili kuzophendula kuzo zonke izaziso ezinjalo, okuhlanganisa njengoba kudingekile noma kufaneleka ngokususa okokusebenza okuphula umthetho noma ukukhubaza zonke izixhumanisi zezinto eziphula umthetho. ukuhamba ngebhayisikili kuzonqamula ukufinyelela kwesivakashi nokusebenzisa Iwebhusayithi uma, ngaphansi kwezimo ezifanele, isivakashi sinquma ukuphinda futhi ukwephula amalungelo okushicilela noma amanye amalungelo empahla yobuhlakani bokuhamba ngebhayisikili noma abanye. Endabeni yokunqanyulwa okunjalo, ukuhamba ngebhayisikili ngeke kube nesibopho sokunikeza imbuyiselo yanoma yimaphi amanani akhokhelwe ngaphambilini ekugibeni ibhayisikili.
Okwenziwe ngenqondo. Lesi Sivumelwano asidluliseli kuwe ukusuka ekugibeni ibhayisikili ukuya kuwe noma iyiphi ibhayisikili noma impahla yobuhlakani yenkampani yangaphandle, futhi kulungile, isihloko kanye nentshisekelo kule ndawo kanye nakuleyo ndawo kuzohlala (njengaphakathi kwezinhlangothi) kuphela nokuhamba ngebhayisikili. ibhayisikili, i-bikehike.org, ilogo ye-bikehike.org, nazo zonke ezinye izimpawu zokuthengisa, izimpawu zesevisi, izithombe kanye namalogo asetshenziswa ngokuphathelene ne-bikehike.org, noma Iwebhusayithi izimpawu zokuthengisa noma izimpawu zokuthengisa ezibhalisiwe zabanikezeli bamalayisensi bokuhamba ngebhayisikili. Ezinye izimpawu zokuthengisa, izimpawu zesevisi, ihluzo namalogo asetshenziswa ngokuxhumene neWebhusayithi kungase kube yizimpawu zokuthengisa zabanye abantu besithathu. Ukusebenzisa kwakho Iwebhusayithi akukuniki ilungelo noma ilayisense yokukhiqiza kabusha noma ukusebenzisa noma yikuphi ukuhamba ngebhayisikili noma izimpawu zokuthengisa zezinkampani zangaphandle.
Izikhangiso. ukugibela ibhayisikili ugodla ilungelo lokubonisa izikhangiso kubhulogi yakho ngaphandle uma uthenge i-akhawunti engakhangisi.
Isibaluli. ibhayisikili ligodla ilungelo lokubonisa izixhumanisi zesichasiso ezifana nokuthi 'Ibhulogi ku-bikehike.org,' umbhali wetimu, kanye nesibaluli sefonti kunyaweni yebhulogi yakho noma ibha yamathuluzi.
Imikhiqizo kazakwethu. Ngokuvula umkhiqizo wozakwethu (isb. itimu) koyedwa wozakwethu, uyavumelana nemigomo yesevisi yalowo zakwethu. Ungaphuma emigomeni yabo yesevisi noma kunini ngokuyekisa ukusebenza komkhiqizo kazakwethu.
Amagama Ezizinda. Uma ubhalisa igama lesizinda, usebenzisa noma udlulisa igama lesizinda elibhalisiwe ngaphambilini, uyavuma futhi uyavuma ukuthi ukusetshenziswa kwegama lesizinda nakho kungaphansi kwezinqubomgomo ze-Internet Corporation Yamagama Abelwe Nezinombolo (“ICANN”), kuhlanganisa Amalungelo Okubhalisa Nezibopho.
Izinguquko. ukugibela ibhayisikili igodla ilungelo, ngokubona kwayo kuphela, ukushintsha noma ukufaka esikhundleni noma iyiphi ingxenye yalesi Sivumelwano. Kuyisibopho sakho ukuhlola lesi Sivumelwano ngezikhathi ezithile ukuze uthole izinguquko. Ukuqhubeka kwakho nokusebenzisa noma ukufinyelela Iwebhusayithi kulandela ukuthunyelwa kwanoma yiziphi izinguquko kulesi Sivumelwano kuhlanganisa ukwamukela lezo zinguquko. ukuhamba ngebhayisikili kungase futhi, esikhathini esizayo, kunikeze izinsizakalo ezintsha kanye/noma izici ngeWebhusayithi (okuhlanganisa, ukukhishwa kwamathuluzi amasha nezisetshenziswa). Lezo zici ezintsha kanye/noma amasevisi zizoba ngaphansi kwemigomo nemibandela yalesi Sivumelwano.
Ukunqanyulwa. ukuhamba ngebhayisikili kungase kunqamule ukufinyelela kwakho kuyo yonke noma iyiphi ingxenye Yewebhusayithi nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kwesizathu, ngesaziso noma ngaphandle kwesaziso, ukusebenza ngokushesha. Uma ufisa ukunqamula lesi Sivumelwano noma i-akhawunti yakho ye-bikehike.org (uma unayo), ungamane uyeke ukusebenzisa Iwebhusayithi. Ngaphandle kwalokhu osekushiwo ngenhla, uma une-akhawunti yezinsizakalo ezikhokhelwayo, leyo akhawunti inganqanyulwa ngokuhamba ngebhayisikili kuphela uma wephula lesi Sivumelwano futhi wehluleka ukwelapha lokho kuphulwa zingakapheli izinsuku ezingamashumi amathathu (30) kusukela ekubikeleni ibhayisikili; inqobo nje uma, ukuhamba ngebhayisikili kunganqamula Iwebhusayithi ngokushesha njengengxenye yokuvalwa okuvamile kwenkonzo yethu. Zonke izinhlinzeko zalesi Sivumelwano okufanele ngokwemvelo yazo ziqhubeke zinqanyulwa, ziyoqhubeka ziqedwa, okuhlanganisa, ngaphandle komkhawulo, izinhlinzeko zobunikazi, ukuzihlangula kwesiqinisekiso, inkokhelo kanye nemikhawulo yesikweletu.
Umshwana wokuzikhipha emthwalweni Weziqinisekiso. Iwebhusayithi inikezwa "njengoba injalo". ukugibela ibhayisikili nabaphakeli balo nabanikezeli bamalayisensi ngalokhu bayawachitha wonke amawaranti anoma yiluphi uhlobo, acacisiwe noma ashiwo, okuhlanganisa, ngaphandle komkhawulo, iziqinisekiso zokuthengiselana, ukufaneleka kwenjongo ethile kanye nokungaphuli umthetho. Akukhona ukugibela ibhayisikili noma abahlinzeki bayo nabanikezeli bamalayisensi, okwenza noma yisiphi isiqinisekiso sokuthi Iwebhusayithi ngeke ibe namaphutha noma ukuthi ukufinyelela kuyo kuyoba ngokuqhubekayo noma okungaphazamiseki. Uyaqonda ukuthi ulanda kusuka, noma uthole okuqukethwe noma amasevisi ngeWebhusayithi ngokubona kwakho nangengozi.
Umkhawulo Wesibopho. Akukho mcimbi oyohamba ngebhayisikili, noma abahlinzeki balo noma abanikezeli bamalayisensi, babophezeleke kunoma iyiphi indikimba yalesi sivumelwano ngaphansi kwanoma iyiphi inkontileka, ubudedengu, isibopho sezomthetho esiqinile noma enye ithiyori yezomthetho noma elinganayo: (i) noma yimuphi umonakalo okhethekile, wengozi noma umphumela; (ii) izindleko zokuthengwa kwempahla esikhundleni semikhiqizo noma amasevisi; (iii) ngokuphazanyiswa kokusetshenziswa noma ukulahleka noma ukonakala kwedatha; noma (iv) nganoma yiziphi izimali ezeqa imali ekhokhwe nguwe ukuze ugibele ibhayisikili ngaphansi kwalesi sivumelwano phakathi nenkathi yezinyanga eziyishumi nambili (12) ngaphambi kwesenzo. ukuhamba ngebhayisikili ngeke kube necala nganoma yikuphi ukwehluleka noma ukubambezeleka ngenxa yezindaba ezingaphezu kwamandla azo. Lokhu okungenhla ngeke kusebenze ezingeni elivinjwe umthetho osebenzayo.
Ukumelwa Okujwayelekile kanye Newaranti. Uyamela futhi uyaqinisekisa ukuthi (i) ukusebenzisa kwakho Iwebhusayithi kuzohambisana ngokuqinile neNqubomgomo Yobumfihlo yokuhamba ngebhayisikili, nalesi Sivumelwano kanye nayo yonke imithetho esebenzayo neziqondiso (okubandakanya ngaphandle komkhawulo noma yimiphi imithetho yendawo noma iziqondiso ezweni lakini, esifundazweni, edolobheni lakini. , noma enye indawo kahulumeni, mayelana nokuziphatha ku-inthanethi nokuqukethwe okwamukelekayo, kuhlanganise nayo yonke imithetho esebenzayo mayelana nokudluliswa kwedatha yezobuchwepheshe ethunyelwa isuka e-United States noma ezweni ohlala kulo) futhi (ii) ukusebenzisa kwakho Iwebhusayithi ngeke kwephule noma ukusebenzisa kabi amalungelo empahla yengqondo yanoma iyiphi inhlangano yangaphandle.
Ukukhululwa. Uyavuma ukunxeshezelwa nokubamba ibhayisikili elingenabungozi, osonkontileka balo, nabanikezeli balo bamalayisense, nabaqondisi babo, izikhulu, abasebenzi kanye nama-ejenti avela futhi ngokumelene nanoma yiziphi kanye nazo zonke izimangalo nezindleko, okuhlanganisa izimali zabameli, ezivela ngokusebenzisa kwakho Iwebhusayithi, kubandakanya kodwa kungagcini nje ngokuphula kwakho lesi Sivumelwano.
Okunhlobonhlobo. Lesi Sivumelwano sihlanganisa sonke isivumelwano phakathi kokuhamba ngebhayisikili nawe mayelana nesihloko esikhona lapha, futhi singalungiswa kuphela ngesichibiyelo esibhaliwe esisayinwe isikhulu esigunyaziwe sokuhamba ngebhayisikili, noma ngokuthunyelwa ngebhayisikili inguqulo ebuyekeziwe. Ngaphandle kwalapho umthetho osebenzayo, uma ukhona, uhlinzeka ngenye indlela, lesi Sivumelwano, noma yikuphi ukufinyelela noma ukusetshenziswa Kwewebhusayithi kuzobuswa imithetho yesifunda saseCalifornia, eU.SA, ngaphandle kokungqubuzana kwezimiso zomthetho, kanye nendawo efanele noma yiziphi izingxabano ezivelayo noma ezihlobene nanoma yikuphi okufanayo kuzoba izinkantolo zezwe kanye nezifunda ezise-San Francisco County, California. Ngaphandle kwezimangalo zokukhululwa okumisiwe noma okulinganayo noma izimangalo eziphathelene namalungelo empahla yengqondo (ezingase zilethwe kunoma iyiphi inkantolo enamandla ngaphandle kokuthunyelwa kwebhondi), noma iyiphi ingxabano ephakama ngaphansi kwalesi Sivumelwano ekugcineni iyoxazululwa ngokuvumelana neMithetho Ephelele Yokulamula ye- IJudicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) ngabaxazululi abathathu abaqokwe ngokuhambisana neMithetho enjalo. Ukulamula kuzokwenzeka e-San Francisco, e-California, ngolimi lwesiNgisi futhi isinqumo senkantolo singaphoqelelwa kunoma iyiphi inkantolo. Ingxenye ekhona kunoma isiphi isenzo noma ukuqhubeka nokuphoqelela lesi sivumelwano izoba nelungelo lezindleko nezindleko zabameli. Uma noma iyiphi ingxenye yalesi sivumelwano ibanjwe njengengekho emthethweni noma ingaphoqeleleki, leyo ngxenye izohunyushwa ukuze ibonise inhloso yasekuqaleni yamaqembu, futhi izingxenye ezisele zizohlala zisebenza futhi zisebenza ngokugcwele. Ukuhoxiswa yinoma iyiphi inhlangano yanoma yimuphi umgomo noma umbandela walesi Sivumelwano nanoma yikuphi ukwephulwa kwaso, kunoma isiphi isibonelo esisodwa, ngeke kuhoxise lelo gama noma isimo nanoma yikuphi ukwephulwa kwaso. Ungabela amalungelo akho ngaphansi kwalesi Sivumelwano kunoma iyiphi inhlangano evumelanayo, futhi evuma ukuboshwa, imigomo nemibandela yayo; ukuhamba ngebhayisikili kungase kunikeze amalungelo ayo ngaphansi kwalesi Sivumelwano ngaphandle kwemibandela. Lesi Sivumelwano sizoba yisibopho futhi sizoholela ekuzuzeni izinhlangothi, abazolandela esikhundleni sabo kanye nezabelo ezivunyelwe.